प्राधिकरणको वार्षिक कमाइ ७५ अर्ब, कोभिड महामारीमा पनि कसरी बढ्यो आम्दानी ? - UrjaKhabar प्राधिकरणको वार्षिक कमाइ ७५ अर्ब, कोभिड महामारीमा पनि कसरी बढ्यो आम्दानी ? - UrjaKhabar
प्राधिकरणको वार्षिक कमाइ ७५ अर्ब, कोभिड महामारीमा पनि कसरी बढ्यो आम्दानी ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको छ । यो विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा सहायक कम्पनीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत हो ।
३५औं वार्षिक साधारणसभा नजिकिँदै गर्दा (आगामी भदौ १ गते वार्षिक साधारणसभा) प्राधिकरणले आम्दानी, खर्च र नाफा–घाटाको हिसाब वा वित्तीय विवरण निकालेको छ । गत आवका वित्तीय सूचक सर्सर्ती विश्लेषण गर्दा संस्थाले वित्तीय सुधारमा कायापलट नै गरेको मान्न सकिन्छ ।
आव २०७५/७६ मा करिब ७१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कमाएको प्राधिकरणको कमाइ गत आवमा बढेर ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले आम्दानीलाई दुई तरिकाले प्रस्तुत तथा व्याख्या गरेको छ ।
आम्दानी, खर्च तथा नाफा–घाटाको चार्टमा ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ भने बिजुली बिक्री, ब्याज लगायत संस्थाको वार्षिक आम्दानी भनेर ७३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यसरी दुई थरी आम्दानी देखिनुले तथ्यांक विश्लेषण वा यकिन आम्दानी कति हो भनेर प्रश्न उठेको छ ।
दुई अंक कुन चाहिँ संस्थाको खास आम्दानी भन्ने ? यसबारे प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘वित्तीय विश्लेषणमा यही देखाइएको छ, आम्दानी नभएर देखाइएन होला । कसरी आम्दानी भयो भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेलाई थाहा होला ।’
ती अधिकारीको अस्पष्ट प्रस्ट्याइँ, आम्दानीका दुई अंक हुनु र कोरोना महामारीका बीच पनि कमाइ बढेको देखिनुले ‘कहीँ तथ्यांकमा ‘म्यानुपुलेट (तोडमोड)’ गरिएको त छैन’ भन्ने आशंका उब्जेको छ । गत चैतदेखि कोरोना महामारीले विद्युत् खपत स्वाट्टै घटेको थियो । यो आधारमा तुलनात्मक रूपमा आम्दानी कम हुनुपर्ने हो ।
सरकारले चैत १० गतेदेखि नै देशभर लकडाउन गरेको थियो । जेठसम्म प्रायः औद्योगिक क्षेत्र बन्द थिए । तिनले खपत गर्ने विद्युत् जगेडा भइरहेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले दैनिक ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटिरहेको बताएको थियो । असारमा विद्युत् खपत केही बढेको थियो । के ८ महिना (फागुन) को कमाइको बलले आम्दानी ह्वात्तै बढेको हो त ?
यदि, यसो हो भने प्राधिकरणमा चमत्कारै भएको मान्नुपर्छ । नत्र आम्दानी बढेको देखाएर वा अंक बढी देखाएर सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्ने व्यवस्थापनको गतिविधि पक्कै राम्रो संकेत होइन ।
बैशाखसम्म दैनिक ६० लाख युनिट विद्युत् खपत घटेको र यही अवस्थामा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा कमी आउने प्रक्षेपण गरेको प्राधिकरणले यति ठूलो कमाइको अंक देखाउनु आश्चर्य नै हो । त्यतिबेला संस्थाको हालत कर्मचारीलाई तलबसम्म ख्वाउन हम्मेहम्मे थियो ।
कोरोना (कोभिड–१९) महामारीमा गार्हस्थतर्फको विद्युत् खपत केही बढेको छ । यसले, आम्दानीमा त्यति ठूलो चमत्कार देखाउँदैन । औद्योगिक लोड नबढेसम्म संस्थाको आम्दानीमा ठूलो भिन्नता आउँदैन । किनकि, प्राधिकरणको कूल आम्दानी मध्ये ४० प्रतिशत उद्योगबाट आउँछ । ४० प्रतिशत आम्दानी दिने क्षेत्र बन्द रहँदा कमाइको मिटर कसरी बढ्यो ?
प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा औद्योगिक ग्राहकबाट ३१.६९ अर्ब, गार्हस्थबाट २७.२४ अर्ब र व्यापारिकबाट ७.२७ अर्ब रुपैयाँ कमाइ भएको थियो । जुन अघिल्लो आवमा क्रमशः २८ अर्ब, २५.१९ र ६.७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । देशको प्रतिकूल अवस्था र उत्पादित वस्तु (विद्युत्) कम बिक्री भएको अवस्थामा पनि कमाइ अघिल्लो वर्षको बढी हुनुलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?
प्राधिकरणले गत आवमा उच्च मात्रामा कमाइ देखाएको छ भने नाफाको अंकले पनि त्यसरी आश्चर्यचकित पारेको छ । यो वर्ष नाफा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ देखाइएको छ । जुन, अघिल्लो आव (२०७५/७६) मा ९ अर्ब ८४ करोड थियो । गत वर्षको कूल नाफामध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ ट्रंक र डेडिडेकेट लाइनको जोडिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठेकै छैन र उठ्ने सम्भावना पनि निकै कम देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले यसलाई आम्दानी र नाफामा गणना गरेको छ । तथ्यांक हेरफेर वा म्यानिपुलेटको यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ । यी यस्तै अन्य गतिविधिबाट पनि प्राधिकरणको आम्दानीको अंक अश्वभाविक देखाइएको हो कि !
विद्युत् खरिद तथा बिक्री
प्राधिकरणले गत आवमा भारतबाट १७२९ गिगावाट घन्टा (१ अर्ब ७२ करोड ९० लाख युनिट) विद्युत् किनेको छ । यति विद्युत् किन्दा औसत प्रतियुनिट ७.८६ रुपैयाँका दरले करिब १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । गत आवमा करिब २० अर्बको विद्युत् किनिएको थियो ।
सोही अवधिमा स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट २९९१ गिगावाट घन्टा (२ अर्ब ९९ करोड १० लाख युनिट) विद्युत् किनिएको छ । औसत प्रतियुनिट ७.२२ खरिद दरका आधारमा प्राधिकरणले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई करिब २१ अर्ब ५९ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
गत आवमा प्राधिकरणको प्रणालीमा ७७४१ गिगावाट घन्टा विद्युत् उपलब्ध थियो । यसमध्ये ६५५९ गिगावाट घन्टा बिक्री भएको थियो । गत वर्ष प्राधिकरणले प्रतियुनिट १०.६२ रुपैयाँका दरले विद्युत् बेचेर मात्र करिब ६९ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ । अघिल्लो आवमा संस्थाले उपभोक्तालाई प्रतियुनिट औसत १०.६५ रुपैयाँमा बिजुली बेचेको थियो ।
प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्मध्ये प्राधिकरणको ३०२१ गिगावाट घन्टा, स्वदेशी निजी क्षेत्रको २९९१ गिगावाट घन्टा र आयातित विद्युत्को योगदान १७२९ गिगावाट घन्टा थियो । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको उच्च माग १४०८ मेगावाट थियो । यहाँ पनि कोभिडको असर देखिएको पाइएन ।
यसैगरी, गत वर्ष विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो अंक १५.३२ प्रतिशत थियो । कोभिड असरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लोड नहुनु, गार्हस्थमा बढ्नु जस्ता कारणले प्राधिकरण आफैंले चुहावट अत्याधिक बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । प्राधिकरणका अधिकारीले नै गार्हस्थतर्फको लोड बढ्दा चुहावट पनि बढ्ने बताउँदै आएका थिए ।